1. A ụzọ ahia na ego Markets
2. Mgbatị: esi Mee Ka Gị First a hit mgbanwe
3. Gịnị Bụ Multiplier?
4. Gịnị si Were Uru?
5. Gịnị bụ Kwụsị Loss?
6. Mkpa nwale kọwara (crude Oil)
7. Mkpa analysis kọwaa (apụl)
8. Nka na ụzụ analysis: iwebata
9. 3 Golden ụkpụrụ nduzi nke na-azụ ahịa na-ere
10. Gịnị Mere ọkachamara ahịa Jiri Libertex mobile?
Ọtụtụ ndị chere na mkpa ka i nwere a ọkachamara ego nketa ma ọ bụ otu nde ebu ka ọzọ n'ime akụ na ụba n'ọma ahịa, Otú ọ dị, na bụ n'ezie abụghị ezigbo.
Ikpo nke ụmụ mmadụ ahia mba ọzọ ego ụbọchị ọ bụla ma kacha agaghị na-atụle ihe ha bụ n'ezie na-eme.
M n'aka na ị gbanwere Forex tupu na-aga a ezumike, ikekwe na ọdụ via a currency trading ụlọ ndò. ị gaara ọnọ ụfọdụ ego n'otu Forex na enwetara ego na ụfọdụ ndị ọzọ. Ihe ị natara azụ gbanwere n'ime guzosie ike n'elu akakabarede price n'oge.
Ka anyị na-atụ anya na n'otu oge ahụ dị ka ị bụ ezumike, e nwere kemgbe ozi ọma na-enweghị ọrụ ego n'ime US kwụsịworo na United States greenback ụgwọ ndị mụbara site ise%. mgbe ị laghachiri anụ ụlọ, ị gbanwere america dollars ala azụ gị dị nso mba ọzọ ego na chọpụtara na ị mere a 5% ego.
Gịnị n'obu? Na mfe okwu gị mere trades: isi mgbe ị zụtara US greenbacks, nke abụọ mgbe ị na-ere ha ma 5% uru.
Expert azụ ahịa ka tụnyere trades, ma, na mmasị na-ewere na mpaghara a mba ọzọ mgbanwe ahịa ohere na ọdụ ụgbọ, ha na-ewere ọnọdụ site na mfe ime online Libertex n'elu ikpo okwu, na ha ekwe ntị, capsules na kọmputa. investors Ọzọkwa achọpụta ụzọ na-atụ anya price Nkea, na ụzọ na-akpata ego na a mgbe ntọala.
Ka anyị hụ ọnụ otú i nwere ike irite site na iji na-azụ ahịa na-ere na ego ahịa.
All ọ pụrụ ịdị mkpa ise mins nke ya jiri, a ngosi akaụntụ na $5,000, na abụọ mba ọzọ ego ụzọ abụọ, EUR / USD na USD / CHF.
Ndị a ụzọ abụọ ka kwesịrị ekwesị atụ ndị dị ka ha ọzọ ruturu ịdị iche iche ezi ugboro ugboro, na i nwere ike ime ka a uru site ha na naanị 5 ka 30 nkeji. Ị ga-agaghị kwesịrị ichere ka ọ lọta njem mmụta.
kwere na Ina malitere!
1. Họrọ EUR / USD si akpan owo ndepụta na-emeghe a zuo ọzọ. ekwe na-etinye ego $500 na a a narị multiplier dị ka ihe atụ.
2. Mepee ọzọ ahia na USD / CHF dị ka ihe akpan owo, eji yiri multiplier na yiri ego ego.
N'ihi na ọ bụla mgbanwe, na broking uche ego a obere ụgwọ (n'ime hà n'ụzọ na a ego alụmdi nwere ego ego maka a Forex). Ị nwere ike ịhụ nke a price na mgbanwe window. ma dị iche na ego alụmdi, dealer Ụlọrụ nza ọnụ.
3. Ka anya dị ka ma trades na-emeghe, na-atụ anya na ise nkeji ọbụna dị ka na-achọ gị trades 'ọgwụgwụ N'ihi.
anọ. Mgbe mbụ mgbanwe uru karịa nke abụọ na otu ahia losses, ma ọ bụ onye ọ bụla trades na-na ego, na-emechi ma igbachi gị ego.
Mgbe i meghere ma trades ka kọwara ebe a na sina ike ịhụ ihe ọ bụla earnings, echegbula. Ọ bụrụ na ndị ahịa bụ udo, ị ga-adịghị ahụ a ọzọ, otú wezuga ya emeghe oge ụfọdụ.
Na anyị ikpe, USD / CHF ego karịa ndị EUR / USD ọnwụ. ekwe si nso ma trades iji nweta ụfọdụ ego na akaụntụ.
Anyị na-na dị nnọọ ego na USD / CHF na naanị ụfọdụ nkeji, na-adịghị eji a nwale n'ụzọ ọ bụla.
A Multiplier bụ otu n'ime isi gia ke Libertex. Ọ na-ahapụ gị ka ibu gị mgbanwe si uru ikike.
Olee otú ọ eserese? Ọ bụ nnọọ ihe dị mfe.
Kwere na-atụ anya na ị zụrụ EUR / USD, gị ego buru ibu bụ $50, na gị multiplier bụ otu. Ọ bụrụ na ihe-ndebe-aga elu 10%, gị ego nwere ike ịbụ $ ise ($50 x 10%).
Ma ọ bụrụ na dị ka megide onye gị ezipụta 20 dị ka a multiplier gị ego ego ga-ebili ka $1,000 ($50× 20).
Dị ka ị pụrụ ịhụ, gị enwetakwa e elu site na 20, na nke ahụ bụ otú ndị multiplier ọrụ.
Nke ahụ bụ nnọọ dị ka ike ọsọ nke a ụgbọala: ndị ọzọ na ọ bụ n'ebe dị anya, na ngwa ngwa ị na-eru gị ebe. Otú ọ dị, elu ijeụkwụ na-eweta na ọ ukwuu ohere. Nke a bụ ihe mere ọ bụla ụgbọala ebumnobi ike na-ahọrọ a ijeụkwụ nke dị mma maka onwe ha dabere na ha revel na, n'okporo ámá n'ala ọnọdụ na saịtị ọbịa koodu.
N'ihi na novice ahịa, anyị nwere ike ikwu na ojiji nke a di ntakiri multiplier, nke nhata 1, nke ga-ezere ihe ize ndụ, ọ bụrụ na ahịa omume n'ebe ị.
Dị ka ị zụta ike na ahụmahụ, ị nwekwara ike dịkwuo gị multiplier.
Were ego bụ a rue mgbe iji na-akpaghị aka gbachiri-na a na-ere nke uru.
mgbe na-eji Were earnings:
• Lets tụlee mkpa ka ị pụọ a ahia-emeghe a awa ole na ole na-apụghị nọgidere nlekota-ndebe ije. Ke idaha emi, ị n'ezie ebe a Were ego iji na-ezu ike obi ike ebe ị gaba anya na-edebe a nkiri.
• Ka anyị kwere na n'otu oge ahụ dị ka ị na-ekiri ihe nkiri na-akpan owo si ego Nkea na a mma n'ụzọ. A Were enwetakwa iji dị na mbụ ga-igbachi-on gị uru site mechanically fọdụrụ gị ọrụ, ozugbo akpan owo esịmde a mma ụgwọ, ka ị na-eme a enwetakwa ọbụna dị ka ị na-ele gị film.
ebe a bụ ihe atụ nke otú ebe a Were uru iji:
• Ị na-emeghe a EUR / USD Buy mgbanwe na 1.0620
• Ị na-etinye ego $500 na a multiplier of 100
• ịlele chaatị maka akpan owo si ọnụego kasị dị ugbu a ọnụ ọgụgụ kasị elu. Na anyị ikpe, ọ 1.0745.
• Gị Were enwetakwa iji mkpa ka a positioned dị n'okpuru kacha ọnụego, na ihe dị ka 1.0725
• Iji ebe a Were enwetakwa ka a quote, mbụ emeghe a ahia na akpan owo wee gaa My Trades
• Họrọ ndị EUR / USD mgbanwe i meghere wee pịa ya
• Họrọ Quote si nkwụsị Loss / Were enwetakwa menu
• Na Were enwetakwa isiokwu, ịtọ gị chọrọ ego, 1.0725 anyị ikpe, na pịa na shop
Ugbu a ị na-adịghị kwesịrị iche banyere akpan owo si ego mgbanwe ma ọ bụ ga-ị na-eji awa nsuso gị chaatị dị iche iche. Ebe mgbaru ọsọ unu ego ogbo e ruru, gị ahia ga nso na-akpaghị aka, na gị ego nwere ike ozugbo edebe gị trading akaụntụ.
Kwụsị-Loss bụ a rue mgbe iji na-eji ahịa na-ebelata ihe ize ndụ.
Mgbe ị na-atụle n'ọma ahịa, azụ ahịa nwekwara ike akọwahie akpan owo price ije na-eweta losses. N'ibelata nke ukwu nke nwere ọnwụ, a na-ere nwere ike ịtọ ụfọdụ ohere ókè bụ dabere n'elu n'ọma ahịa dịruru ná njọ.
Nke a na-echebe gị na-enwe na-egosipụta chaatị dị iche iche maka ruo ogologo oge etiti oge nke oge na ike yipụ obi zuru ezu mgbe eme isi trading nhọrọ. A gbochie-Loss iji na-enye gị na-ahapụ gị na ihuenyo na isi ma na-ekiri a nkiri na etu esi gị iyi egwu nke ukwu na-capped.
Right ebe a bụ ihe atụ nke a ụzọ nso a gbochie-Loss iji:
• Ị na-emeghe a EUR / USD zuo mgbanwe na 1.0605
• Ị na-eme investments $500 na a multiplier nke a narị
• Iji ebe a igbochi-Loss iji n'ụzọ ziri ezi, a lee anya na chaatị maka akpan owo si elekọta kacha ugbu a ojuju. chọta ebe di ntakiri ego.
• Gị nkwụsị-Loss iji ga-positioned nanị n'okpuru di ntakiri ọnụego, na banyere 1.0580
• Iji nso a nkwụsị-Loss ka a quote, mbụ emeghe a ahia na akpan owo mgbe nke gaa My Trades
• Buru EUR / USD ahia i meghere wee pịa ya
• Họrọ Quote si gbochie Loss / Were enwetakwa menu
• N'ime forestall Loss isiokwu, ịtọ gị chọrọ na-eri, 1.0580 anyị ikpe, na pịa na ụlọ ahịa
Ugbu a ị na-adịghị na-atụ egwu banyere akpan owo si ọnụego mgbanwe ma ọ bụ ga-ị na-eji awa nsuso gị chaatị dị iche iche. Your ize ndụ na-gbakọọ na-arụ.
Isi Analysis Explained
Crude ụgwọ na-n'ịtụgharị mgbe niile, ha na-enwe mmetụta na enyemaka nke òtù OPEC nhọrọ, n'etiti East esemokwu, n'ichepụta boosts na Iran na ọtụtụ dị iche iche ihe.
Dị ka ihe atụ, ka na-ọmụma bipụtara na January 2016: Russia na òtù OPEC iji belata Down mmanụ n'ichepụta ka egbochi akwalite-apụ.
on February 16, 2016, Òtù OPEC na Russia n'ọnọdu n'ezie na kefriza crude n'ichepụta.
on February 17, crude mmanụ ụgwọ wụpụ $32.29 ka $34.31 (6.atọ%). N'ihi na ndị ọzọ 20 ụbọchị, ihe-ndebe echekwara na-eto eto, na na March 7, ya ruru $ 40.seventy isii, a elu nzube nke 26.2%.
Ịkwụsị ozi ọma tinyere mkpa ọkwa na nkwekọrịta na-egosi kwa ụbọchị. o kwere omume na-ekiri ha na telivishọn ma ọ bụ na-akara. Ndị dị otú ahụ ego ihe nwere ike pụtara dị trading alerts; via ịgụ ha, i nwere ike ịkọ ma ọnụego ga-gaba n'iru nzube ma ọ bụ daa.
Ime trades via usoro a na-akpọkarị isi nwale.
A ogologo anya oge, dị ka a tọhapụ a ohuru iPhone, iPad, ma ọ bụ MacBook, nwere ike nzube ogologo queues na-echekwa. Nke a ina, n'oge ya, nwere ike Ọzọkwa nwere mmetụta na a ịrị elu push n'ime ihe-ndebe nke Apple ebuka.
Nke a na-enye a magburu onwe ịkpata ohere maka ihe ọ bụla a hit dealer.
Ka anyị na-atụ. on September 7, 2016, ọhụrụ iPhone 7 gbanwere n'ime nyere ọha na eze.
The nnọọ hà ụbọchị, Apple mbak bilie $107 ka $ a narị na iri na ise.
Ihe omume a gbanwere n'ime gụnyere na ozi niile portals, ka anyị niile (ọ dịcha ka, gụnyere ị) nwere ike na-ewere banyere ya.
Ndị dị otú ahụ akụkụ ụfọdụ nke ihe ọmụma banyere kasị ama na-emepụta, ngwaahịa na ọrụ (facebook, Microsoft, Google, naa, were gabazie.) na-na-ulo oru ụbọchị ọ bụla, na-akara na telivishọn. Onye ọ bụla n'ime ihe ndị a bụ a trading ịrịba ama na ka ị na-eme ka a mbụ ọnụego earnings.
Trades bụ dabere na ozi ọma na n'oge na-akpọkarị isi analysis, otu n'ime ndị kasị ewu ewu na-azụ ahịa na n'ire usoro.
Iji nwee ihe ọmụma na-azụ ahịa na-ere selections, nke na-agụnye ma ịzụta ma ọ bụ na-ere ihe akpan owo, mkpa ka ị chọpụta ihe na n'ọma ahịa expenses. On gị nkasi obi, ndị ahịa na-visualized n'ime ụdị chaatị dị iche iche.
Ọ bụrụ na i na-ekpebi ihe ikuku okpomọkụ chaatị ka 2 ntụpọ ihe, ị pụrụ nnọọ ịhụ etiti ebe okpomọkụ ike, i.e. ebe ya fluctuated na a ezigbo nso n'etiti oge na mgbe ahụ na ụba sharply na okpomọkụ na-ebelata ke oyi.
Gịnị mere n'ime n'ofè ga ọbụna na-egosi na aka - echiche a bụ dị ka na ọdabara ka okpomọkụ dị ka ọ bụ na akụ na ụba na ahịa. Nke ahụ bụ n'ezie na zuru oke nke oru nwale.
Kwere anyị otu n'ime ndị kasị ewu ewu tech nwale gia, nkwado na-emegide, dị ka ihe atụ.
Mgbe price na-aga elu na mberede, ndakpọ ụzọ, dị ka ma ọ bụrụ na ọkụkụ a mgbidi, ọ bụ oge iji na-akwalite.
Mgbe ọnụego dara na mgbe nile n'otu mgbe bounces elu, dị ka a bọl bounces elu anya n'ala, ọ bụ ihe magburu onwe mgbaàmà gaba ogologo.
na ojiji nke anyị trading n'elu ikpo okwu, ị pụrụ ekpebi extra edoghi na a chaatị kụrụ n'elu reversals, ma ọ bụ iji na-egosi na-enye gị ịzụta ma na-akwalite n'ókè.
Ịgbanwe rụọ ọrụ nke ọma ma na ntukwasi-obi, nanị na-eso ndị atọ Golden ụkpụrụ nduzi!
Nọgide na-eji ejiji na-azụ ahịa na-ere. n'ime akaụntụ Pronouncing: The mbiet bụ enyi gị! bụrụ na ị na-ahụ ego na-nanị na-akpụ akpụ na a ziri ezi, ahia a n'ụzọ. Ọ na-emekarị mfe na-agba ọsọ na ifufe!
Ekwe gị uru na-eto eto, ọbụna dị ka proscribing gị losses. Gị ego mkpa gafere gị losses, ọ bụ na mfe! ọ bụ anya yiri na ezigbo ịdị adị: irite extra, emefu ọtụtụ obere. Your iyi egwu / otuto ruru mkpa ka 1:2... ma ọ bụ karịa!
nri ebe a bụ 1/3 iwu: ịchịkwa gị ego. mgbe ị na-amalite amalite ịgbanwe, iji ego quantities na multipliers, ka i wee ghara n'ihe ize ndụ karịa 2% nke akaụntụ gị itule. Nke a n'ụzọ, ihe ọma ọzọ nwere ike ịbụ ọnụ ala karịa a ụgbọ ala price tiketi.
Na gị nkasi obi, anyị na-na, ghọrọ usoro dealer Tracker, a nnọọ dị ka ngwá ọrụ iji nyere gị aka arapara ụkpụrụ ndị a ebe ị na-eme ka gị na mbụ nzọụkwụ dị ka a Trader.
Gaa na-ekiri anyị ntụziaka na-achọpụta ụzọ ahia na-esonụ ndị iwu!
Ahia ọma, ị chọrọ nnọọ nke ọma na-enyocha ahịa na-eme ngwa ngwa ka alerts na ha na-eziga gị n'ụzọ. The Libertex internet ọnụ ga-nyere gị na nwale, ọbụna dị ka ndị Libertex cell App na-eme ka n'aka na ị ga-etiyela ọ bụla trading ohere. N'ime iri asatọ% nke ihe ịga nke ọma investors iji onye ọ bụla na-Libertex internet ọnụ na Libertex mobile ngwa.
Chegodị ụdi ọnọdụ: ị rụọ ọrụ nke ọma na-agba ọsọ gị ahịa analysis n'ime Libertex net ọnụ na kpebisiri ike na-emeghe a ahia, ma mgbe ahụ, ị ​​definately nwere pụọ gị table na e nyere jidere a ọbịa jam, ma ọ bụ ikekwe ị gara ekiri nhụjuanya a fim ma ọ bụ gara ileta a PAL. Site na iji iji Libertex cellular ngwa ị nwere ike ngwa ngwa na-eme ka ihe niile na ọnụego Nkea n'otu oge dị ka ndị a ogologo ụzọ dị anya site na gị na desktọọpụ, i.e. ị pụrụ ọzọ na laa, oge obula, n'ebe ọ bụla. Na Libertex mobile ngwa, ị nwere ike idezi oghe ọnọdụ, nakwa dị ka na-emeghe ọhụrụ trades ma nyochaa gị mmetụta na ozugbo. Nke ahụ bụ kpọmkwem bara uru mgbe n'ozuzu n'ọma ahịa ọnọdụ adịworị ọcha gị.
Mgbe ị chọrọ na-eji oge na analysis, na-eme ka isi ihe selections, na Libertex net ọnụ bụ a n'ezie zuru okè ngwọta. Na nke a na-azụ ahịa na-ere n'elu ikpo okwu, ị e nyere ihe niile ị chọrọ ka: akpan owo ratings, technical analysis ngwaọrụ, na-agbasa ozi. N'otu aka ahụ, anyị net dabeere kpam kpam n'elu ikpo okwu kwe gị uru nghọta n'ime anyị ọkachamara 'reviews na nkwanye tupu ị na-emeghe a mgbanwe.
Download anyị cellular ngwa thru na Andriod Market ma ọ bụ site na AppStore, na-eji anyị na web n'elu ikpo okwu site na ọkacha mmasị gị nchọgharị.